Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: mpitsikilo ny fandroson’ny fandrosoana | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: mpitsikilo ny fandroson’ny fandrosoana
Tsy ilaina fandalinana fa iaraha-mahita ny tsy filaminan’ny toe-draharaha sy ny fikorontanan’ny tontolo iainana. Mifanosona miray monina ny fahantrana sy ny harena. Manako fitarainana avokoa ny sokajin’ny mponina tsirairay sy ny vazantany rehetra. Noho ny maha olombelona sy araky ny fiainana an-tany moa dia samy manana ny fahasahiranany. Fa eto an-toerana, ho an’ny ankamaron’ny olona efa manahatahaka ny fijaliana ny fizakana ny fahasahiranana. Na misavovona aza ny fahantrana, tsy hita ho lazaina hoe tsy misy ny harena. Na ny fikaretsahan’ireo fiara sy môtô mitombo an’isa isan’andro efa tsy ho zakan’ny tsenan’ny làlana sy arabe intsony aza dia sarotra ny hilaza ny tsy fisian’ny vola mivezivezy, saingy tsy fantatry ny maro ny làlana fidirany. Na izany na tsy izany, efa manempotra ny maro ny setrasetran’ny fahasahiranana.
Arak’izany mipetraka ny fanontaniana, manao ahoana marina ny tena tarehin’ity fandrosoana izay katsahana ity? Tsy afaka dinganina anefa ary tsy maintsy atrehana arak’izay haingana azo atao ny fomba ampitsaharana ny herisetra ateraky ny fitombon’ny fahasahiranana. Raha ho vantanina ny filaza azy dia resa-bola. Sarotra ny fisamborana azy. Malama anefa ny fitsorikany avy eo an-tànana, izany hoe tsy mifandanja amin’ny fivoahany ny fidirany. Fandanjana miankina amin’ny toe-karena ankapobe anefa izany ka tsy vitan’ny fanapahana didy na lalàna, fa mitaky fotoana maharitra, izany hoe tsy maintsy miverina amin’ny fitakiana faharetana sy fihafiana avy amin’ny vahoaka.
Tsapa ny fahasarotan’ny fanatanterahana ny adidy maro rantsana arak’izany. Samy maika avoka na ny fitondrana vonjy ho fanamaivanana ny fangirifiriana ateraky ny fitombon’ny fahasahiranana, na ny fiaingana ho amin’izany fandrosoana efa ela nampanantenaina no nanaovana anton’ny fanentanana fihafiana nefa tsy namokatra afa-tsy fihemorana sy fitombon’ny fahasahiranana. Lavitra ny làlana mialoha ny hahatongavana any amin’izany fandrosoana izany. Be izay fotoana lany tamin’ny fifamitapitahana izay. Araky ny tokony ho izy anefa tsy rehefa mahatratra ny faritra tampony izay vao afaka hisitraka ny vokatra ny mponina. Eny am-pandehanana eny arakaraky ny dingana vita dia efa tokony hahatsapa fahatsarana ny olona, ohatra fotsiny noho ny fihemoran’ny fihafiana. Sarotra moa hihavitra fa hihena ny vidin-javatra, fa ny fidiram-bola no antenaina hitombo, arak’izay ny fisondrotry ny fahafaham-bidy izay manosika ny fiakaran’ny fari-piainana.
Tsy resaka manidina ny fandrosoana, ny trangan’ny fomba iainany ny andavanandrony dia ampy ataon’ny tsirairay fetra ahafahany mitsapa ny fandroson’ny fandrosoana.